Dumarka Ugu Adkaysiga Badan Marka Lagu Jiro Duruufaha Adag Waxay Ku Nool Yihiin Qaarada Afrika War-Bixintan Ka Eeg | IctiraafNews.com
Dumarka Ugu Adkaysiga Badan Marka Lagu Jiro Duruufaha Adag Waxay Ku Nool Yihiin Qaarada Afrika War-Bixintan Ka Eeg
December 16, 2016 - Written by Waxaa Qoray > Shaqaalaha Ictiraaf News
Bangiga Adduunka, ayaa sheegay in haweenka Afrika ka adkaysi iyo wax tar badan yihiin ragga marka ay yimaaddaan dhibaatooyinka ka midka yihiin saboolnimada, cunto yaraanta, caafimaad la’aanta, isbeddelka cilmilada iyo abaaraha.
Inkastoo ay aad u yar yihiin dedaallada lagu horumarinayo dhaqaalaha haweenka Afrika iyo horumarka meelo badan oo qaaradda ah, haddana dumarka Afrikaanku waxa ay u adkaystaan xaalad kasta oo noloshooda la soo gudboonaata.
Ganacsiga caalamiga ah waxa uu u muuqdaa mid aan laga wada qaybgelin oo aanay laga qaybgelin dad ku filan; haddii ay tahay haween iyo rag, dadka aan shaqayn, kamana faa’iidaan dad ku filan.” Sidaa waxa yidhi Mr. Jim Redden oo ah khabiir ka tirsan Jaamacadda University of Adelaide Institute oo Jamhuuriya soo xigtay.
Waxa kaloo Bangiga Adduunku sheegay in meelo badan oo Afrika ah haweenka loo diido in ay shaqeeyaan amma yeeshaan hanti u gaara, siiba kuwa ku nool goobaha ay aadka uga shaqeeyaan dhaqannada iyo caadooyinka soo jireenka ah.
Daraasado kala duwan oo Baanka Adduunku sameeyey, ayaa lagu ogaaday in iyadoo culayso badan haystaan haweenka Afrika ay haddana ka baxaan oo ragga ka adkaysi badan yihiin marka ay yimaaddaan masiibooyinka dabiiciga, dagaallada iyo saboolnimada xad-dhaafka ah.
Haddaba, dawladda Australia oo kaashanaysa Bangiga Adduunka, ayaa ka bilowday dalka Koonfur Afrika shir hordhac u ah barnaamij la doonayo in haweenka Afrikaanka lagu soo daro ganacsiga caadiga.